Dzimwe nzira ina dzemusika wekutengesa | Ehupfumi Zvemari
Inogona kunge iri nguva yekuchinja shanduko yezvemari kuti kuchengetedza kwedu kubatsire. Nezvikonzero zvakasiyana, dzimwe nzira dzekudyara dzinogona kuoneka uye dzinogona kusimudzira chirevo chemari mukupera kwegore. Zvichida nekuda kwemisika yemasheya ivo vaoma mukati mavo kukwidza, pamwe nekuda kwekuneta kana kunyangwe nekuti ndiyo nguva yakakodzera kwazvo yekuyedza mhando nyowani dzekudyara. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuziva kuti kune hupenyu huripo kupfuura bhegi sezvatichazokuratidza mune ino chinyorwa.
Izvo ndezve kutsvaga zvigadzirwa zvemari izvo mune yavo chimiro uye zvakasikwa zvakafanana nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya. Hakuzovi nematambudziko akawandisa kuti uzviwane uye ikozvino iwe unofanirwa kungozvisarudzira zvinoenderana neprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor: vane hasha, vanochengetedza kana vepakati. Nekuti izvo zvazviri pakupera kwezuva ndezvekuti iwe unatsiridze purofiti yekuchengetedza kwako. Kana zvirinani kuti iwe usarasikirwe neshanduko iyi yauchasangana nayo kubva zvino zvichienda mberi.
Iko kushanduka kwemisika yemari yakatungamira mukuonekwa kwezvitsva zvigadzirwa zvemari zvaunogona kushanda kubva kuSpain. Izvo zvinogadzirwa pasi penzira dzakasiyana dzekudyara, asi neyakajairika dhinomineta mune ese uye ihwohwo hukama hwavo hwakananga nemisika yemari. Kunyangwe uchiita nemaonero akasiyana kana nzira dzekunzwisisa kudyara. Sezvauchaona, vanogona kuve dzimwe nzira dzakanakisa kumusika wemasheya uye mune dzimwe nguva vanozokutendera kuti usiyanise mari nekugona kukuru. Iwe unoda here kutora aya matsva mamodheru kuti uwirirane nenyika yemari?
1 Dzimwe nzira: mari yekudyara
2 Nemari dzakasiyana siyana dzemari
3 Yakanyorwa mari
4 Zvimwe zvakaomesesa: mvumo
5 Kodzero dzinowanikwa
6 Mitero yakabatana nemusika wekutengesa
Dzimwe nzira: mari yekudyara
Mukati memari yekudyara, izvo zvakabatanidzwa kuequity ndizvo zvakafanana zvakanyanya nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya. Nekuti chinangwa chayo chakafanana, kunyangwe mune ino kesi hausarudze chiito chakati. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe uchave uri chikamu che mari yehomwe portfolio izvo zvakagadzirirwa nemaneja. Nemaprofiles akasiyana uye kunyange enzvimbo enzvimbo. Hazvishamisi kuti, imwe yemabhenefiti makuru ekusarudza iyi imwe nzira mukudyara ndeyekuti iwe unogona kuenda kumusika chero wezvemari mupasi rose, kusanganisira wepakutanga kwazvo waunogona kufungidzira izvozvi.
Hunhu hukuru hwemari yekudyara mari ndeyekuti vanogona kukugadzira diversify upfumi nenzira yaunoda iwe. Iri zano rinoshanda kwazvo kana kusagadzikana iri iro rinonyanya kukosha mumisika yemari. Ichakupa chengetedzo huru kupfuura mumusika wemasheya uye unogona zvakare kuiwedzera kuburikidza nemari dzakasiyana dzekudyara dzakasiyana. Kune rimwe divi, makomisheni ayo ari mumutsetse wakafanana nemusika wemasheya, kunyangwe iwe uchifanira kutarisa kuti ndeapi aanobatanidza muhomwe.
Nemari dzakasiyana siyana dzemari
Iri kirasi rezvigadzirwa zvemari rakasiyana nemamwe mamodheru ekudyara nekuti anounza pamwechete akasiyana emari zvinhu. Iwe hauzoise mari yako, semuenzaniso mu Spanish mari, asi iwe unogona kuiperekedza pamwe nedzimwe sarudzo dziri mune dzimwe nzvimbo dzepasi. Ndiwo mukana wekuti equity mari yekudyara inokupa iwe. Sezvaunogona iwe vatambidze kune imwe mari chero nguva uye pasina kukubhadharira imwe yuro. Nemamiriro ekuti mashandiro anoitwa mukati meiyo imwechete bhangi. Uye nguva zhinji sezvaunoda sezvo iri risingaperi mashandiro uye haina kubvisirwa mutero semakomisheni kana zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kwayo.
Kune rimwe divi, ichi chigadzirwa chakagadzirirwa kudyara chiripo mukupa kwemabhangi kuburikidza neicho chaicho yakafara kupa uko iwe kwaunogona kusarudza infinity yemari yeaya maitiro. Chidiki diki chekuita kuti mashandiro abatsire ndeyekusarudza mari yenyika yekudyara Izvo zvakaenzana zvakaenzana mukuita kuchengetedza kunobatsira uye zvakare vanopa makwikwi mazhinji emakwikwi kupfuura mune mamwe mamodheru echigadzirwa ichi chemari. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusevha ingangoita hafu yemari zvine chekuita nemakomisheni aunofanira kutarisana nawo kubva zvino zvichienda mberi.
Ivo vanozivikanwa zvikuru se ETFs uye iri musanganiswa wakasarudzika pakati pemari yekudyara nekutenga nekutengesa masheya. Iwo anokurudzirwa kwenguva ipfupi pane inoitika mari yekudyara zvichibva pamari. Nekudaro, ivo havana kuganhurirwa chete kumusika wekutengesa asi iwe unogona kuisa mari yako mukati zvimwe zvinhu zvemari, mamwe acho ane hunyanzvi. Semuenzaniso, mbishi zvigadzirwa, simbi dzinokosha uye simba, pakati pezvimwe zvakakosha. Mupfungwa iyi, iri mari inoshanduka-shanduka inoenderana nemhando dzose dzevashambadzi vadiki nepakati.
Iwo ma mechanics akafanana zvakanyanya kune mutual mari pane kutungamira kudyara mumusika wemasheya, kunyangwe pasina kugovana portfolio sezvazvinowanzoitika neizvi. Imwe yemabhenefiti makuru ekusarudza iyi imwe nzira mukudyara ndeyekuti iwe uchawana zvimwe anodhura kwazvo makomisheni uye kuti ivo vanokwanisa kukuserera mari yakawanda mukuita. Kunyanya kana iwe ukashandisa yakawanda mari pane ichi chemari chigadzirwa uye kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi. Pasina chero nguva iwe unofanirwa kuzvimisikidza wega kune imwe kambani kana kunanga kudyara mumusika wakazvarwa wemusika.
Zvimwe zvakaomesesa: mvumo
Imwezve nzira ine hukasha uye kunyange yakasindimara kumusika wemasheya inogadzirwa neanonzi mvumo. Icho chigadzirwa chinobva mune zvemari, kunyanya ivo vari zvekutaurirana sarudzo muchimiro chekuchengetedzeka chinopa muridzi wayo kodzero, asi kwete chisungo, kutenga (Kufona) kana kutengesa (Isa) imwe huwandu hweaseti (iri pasi peaseti) pamutengo wakatarwa (mutengo wekushandisa kana mutengo wekurovera) panguva nguva yenguva kusvika zuva rakatemerwa (zuva rekupera) mukutsinhana kwekubhadharwa kwemutengo (premium).
Dambudziko rayo hombe nderekuti rakanyanya kuomarara kushanda neiyi modhi yekudyara uyezve inoda a zivo iri nani yemisika yemari. Hazvishamise kuti iwe unogona kurasikirwa nemari yakawanda mukushanda kana zvaunotarisira zvisina kuzadzikiswa kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Neichi chikonzero, iwe unofanirwa kuve unongwarira pakusarudza uye kuziva zvauri kunyatso kubvumirana nekuti njodzi yechigadzirwa ichi yakanyanya kukwirira kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa zvemari. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete icho chirase.
Zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva pakubata kwako ndezvekuti kana iwe ukatenga gwaro unowana kodzero, kwete chisungo, kutenga kana kutengesa iyo midziyo yepasi. Kune rimwe divi, haufanire kukanganwa kuti mutengo wakabhadharwa warandi unonzi iyo premium, uye ndizvo zvazvinoda kuwana kodzero yekutenga kana kutengesa iyo yepasi nhumbi. Ndokunge, izvo zvaunenge uchinge uchiita kubhadhara mubhadharo. Kune maviri marudzi emhando dzaunofanirwa kusiyanisa zvakajeka pakati.
El warandi kufona inova apo muridzi wemari anosarudza kubheja kumusoro uye dhirandi yekudhiza inomiririra iyo inverse zvachose kesi. Ndokunge, kana investor achitarisira kudzikira mumutengo weiyo yepasi nhumbi. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kubheja pazasi pemisika yezvemari, chiitiko chisingaitike mune zvigadzirwa zvemari zvakawanda. Kuve, nekudaro, imwe yemabhenefiti ayo akakosha kana uchishanda neichi chakakosha mari chigadzirwa. Kunyangwe iyo yakagadzirirwa iyo chaiyo yakatarwa investor chimiro nekuda kwenjodzi yekuita kwayo.
Mitero yakabatana nemusika wekutengesa
Iyo iri nyore nzira yekushandisa pamusika wemasheya, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti hauise mari yako panjodzi. Muzviitiko zvese, iwe une yakatarwa uye yakavimbiswa kudzoka, zvisinei nezvinoitika mumisika yemari. Kunyangwe iwo marimendi ekumisidzana asingagutsi panguva ino, ine kufarira kwakatenderedza 0,50%. Kunyangwe kana mamwe mamiriro akasangana muchigadzirwa ichi chinogona kusimudzwa kusvika pa5%.
Chero zvazviri, ine kupera izvo zvinogona kuve makumi maviri nemana, makumi matatu nematanhatu kana kutodarika mwedzi Pasina mukana wekuikanzura pamberi uye kuti iwe unogona kunyoreswa kubva pamwero wakaderera pachikamu chakanaka chehupfumi hwepamba. Nemipiro kubva ku24 euros uye pasina chero rudzi rwemakomisheni kana imwe mari mukutungamira kwayo kana kugadzirisa. Kuva chimwe chezvinhu zvinodzivirira zvakanyanya zvaunogona kuwana panguva ino nekuda kwehunhu hwayo. Nekuti pakupera kwezuva haungarasikirwe neyuro euro, kunyangwe shanduko yemusika wemasheya isisaratidzirwi kudzivirira zvaunofarira.
Sezvaungave iwe wakaona, iwe hausati uchingova chete nemusika wemasheya wekuita kuti capital yako ibatsire, asi pane izvozvi, une zvimwe zvishandiso zvinogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekusvika kupera kwegore uine yakakwira chiyero muako account yekuchengetedza. . Ndokunge, shure kwezvose, chii chiri nezvevatyairi vane yakanyanya kudzivirirwa mbiri, sezvazvingave zviri kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Dzimwe nzira ina dzehomwe